फ्ल्यासब्याकबाट : सभामुख अग्नि कि कञ्चन ? - Vishwa News
January 29, 2020 ० बिचार / प्रतिक्रिया
विद्रोहको राजनीतिकरणपछि नाम पनि प्रतिस्थापन—विस्थापनको चक्रअनुसार चल्छ । मन त पुष्पकमल दाहाललाई पनि सबैले ‘प्रचण्ड’ मात्रै भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर विद्रोहले प्रचण्ड र राजनीतिले पुष्पकमल स्वीकार गर्यो । अब सबका पार्टीका टेकनाम सङ्ग्रहालयमा भेटिने अवस्थामा छन् । विद्रोहकालीन नामका चार्म अहिले छैन । प्रभाकरको त्रास हटेर जनार्दन शर्माको लोकप्रियताको पारो ह्वात्तै बढेको हिजो मात्रै होइन ? हाते माइक बोकेर कासन ठोक्ने पासाङलाई राज्यले नन्दकिशोर पुनको रुपमा मेजमानी दिइरहेकै छ । लालध्वजको अस्तित्व जसरी विलुप्त छ कीरणको प्रकाश पनि उस्तै धमिलो छ । अहिलेको राजनीतिक पुस्तालाई के कञ्चन, के निर्मल …सब धमिलो । यो बसाईमा द्वन्द्वको भाष्य केलाउँदा नाममा ठोक्किएको मात्र हूँ, अल्झिएको होइन । अल्झिने काम सभामुख निर्वाचनताका माइतीघर मण्डलामा ‘फेरी’ लाउनेहरुलाई छाडें । अर्थात्, प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखको रुपमा अग्नि सापकोटा ‘कञ्चन’ चुनिए । नेकपाबाट सापकोटा निर्विकल्प नहुँदानहुँदै आन्तरिक रस्साकस्सीपछि उनी नै उमेदवार चुनिए र अन्ततः निर्विरोध निर्वाचित सभामुख भए ।
९ वर्षअघि जेठको १३ गते शुक्रबार एक हूल मान्छे सर्वोच्च अदालत परिसरमा थिए । हूललाई मानवअधिकारको पहरेदारी गर्ने ‘बताउनेहरु’ले नेतृत्व गरेका थिए । उनीहरुको अभिष्ट जे भए पनि अदालतमा दर्ता गर्न लागिएको कागजको मूठोमा केही विपक्षीको नाम थियो । नामको सूचीको पहिलो नम्बरमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय थियो । दोस्रो विपक्षी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा थिए । तेस्रो विपक्षी थिए, यौन व्यभिचारको अभियोगमा हाल कारागारमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा । रिट निवेदन पत्र बोकेर जानेहरुको निशाना चाँहि अग्नि सापकोटा थिए जसलाई द्वन्द्वकालीन एउटा घटनाको आरोपी बनाइएको थियो । र, सापकोटालाई मन्त्री हुनबाट रोक्ने त्यो अन्तिम तर असफल प्रयत्न थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो बेला मानवअधिकारको तथाकथित हवाला दिएर दूनो सोझ्याउन पल्केकाहरुको याचना सुनिदिएको हुँदो हो त अग्नि सापकोटा संसदमा विनाप्रतिष्पर्धा औ निर्विरोध निर्वाचित सभामुख हुने दिन आउने थिएन । तर आयो । भूमिका निभाउने सवालमा अग्नि सापकोटा कञ्चन हुन सक्लान नसक्लान् तर नेकपाको तर्फबाट सभामुखमा पठाइएका सापकोटाको ‘इन्ट्री’ कम मिस्टेरियस र रोमाञ्चक छैन ।
द्वन्द्वलाई रातो आँखाले हेर्ने कि सेतो आँखाले ? कुन चश्मा लाएर हेर्ने ? द्वन्द्वरत पक्षहरुबारे नै पैरवी गर्ने कि पक्षधरतामा ? सीमित भएर कि समग्रतामा ? द्वन्द्वलाई निरपेक्षतामा पर्गेल्ने कि सापेक्षतामा ? द्वन्द्वको अवतरण नै जायज कि नाजायज ? द्वन्द्व मेटाउने कि थप द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने ? त्यतिबेला पनि थिए यी प्रश्न । हामीले शान्तिप्रक्रिया र त्यसपछिको शब्दावली सङ्क्रमणकाललाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? सङ्क्रमणकालमा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धनमा कतिसम्म जिम्मेवार हुने ? त्यतिबेला जस्तै अहिले पनि उस्तै छन् यी प्रश्न ।
निःसन्देह, सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनमा विलम्ब भयो । दलहरु गैरजिम्मेवारै भए । दलहरु आआफ्नो डम्फु बजाउन व्यस्त रहँदा द्वन्द्वको अवतरणपछिको गम्भीर पाटो वेवास्ताको शिकार भयो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानवीनका सवाल तपसिलको विषय बनाइएकै हो । दलहरुले यसलाई मागिखाने भाँडो र सौदाबाजीको विषय बनाएकै हुन् । त्यसैले नेपाललाई असाध्यै प्रेम गर्ने केही अन्तर्राष्ट्रिय समूह गत वर्षको माघ १० गते झैं विज्ञप्ती जारी गर्छन् र ‘पख्लास् ! नत्र….’ को शैलीमा सडकमा कठपुतलीहरु उतार्छन् । हो, त्यसैले त जुनबेला बालकृष्ण ढुंगेल र अग्नि सापकोटाहरुको विषय आउँछ त्यो बेला असारे गड्यौलाझैं मानवअधिकारका रखवालाहरु सडकमा फुत्रुक्क झर्छन् । हो, हामीकहाँ मानवअधिकारका धेरै उँटहरु छन् जो अर्धवार्षिक रुपमा नेपालको द्वन्द्व, सङ्क्रमणकाललगायतका मुद्दामा चर्न, पानी भर्न निस्कन्छन् ।
त्यतिबेला सापकोटाविरुद्ध रिट निवेदनको पोको बोकेर सर्वोच्च अदालत जानेमा सुशिल प्याकुरेल, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, कनकमणी दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, सुवोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, मन्दिरा शर्माहरु थिए । अहिले त्रिपाठीलगायतका नयाँ अनुहार थपिएका मात्र हुन् तर समूहको मुद्दा त्यही हो । अदालतसँग माग त्यही हो, ‘श्रीमान् ! फलानो सापकोटा संदिग्ध हुन् तिनलाई संवैधानिक पदमा जानबाट तत्काल रोकियोस् ।’ समय मात्र बगेको हो, द्वन्द्वलाई आफूअनुकूल वा स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने संदीग्ध व्यवसायिक चिन्तन ज्यूँ का त्यूँ छ । यो चिन्तनका हिमायतीहरु तिनै हुन् जो बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणमा रातबिरात तारे होटलहरुमा तामस गर्न तल्लीन थिए ।
नयाँ कुरा हुँदै होइन, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर केही अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरु बेलाबेला चिन्ता प्रकट गर्छन् । चिन्ता प्रकट गर्नु उनीहरुको पेशा हो, व्यवसाय पनि हो, गर्दै आएका छन् । कहिले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको छाता ओडेर त कहिले यूरोपीय युनियनको छहारीमा एउटा संगठित समूहलाई नेपालको संक्रमणकालीन न्याय देखेर भतभती मन पोल्छ । इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट होस् वा एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, सबैले ऐनमौकामा विज्ञप्ती जारी गरिरहेकै छन् । ह्युमन राइस्ट वाच हुन् कि ट्रायल इन्टरनेशनल उनीहरुले आफ्नो उपस्थिति देखाएकै छन् । अन्यथा लिनैपर्दैन, त्यो पनि किसानले गर्नेसरह खेती नै हो । सभामुख सापकोटाको हकमा पनि यो लागू हुन्छ । र, नेपालकै एउटा सभ्रान्त घेरा जुनबेला बादल लाग्छ त्यही बेला कोदाली बोकेर खेत चाहार्ने लतको व्यसनी छ । यसभित्र केही भाले (भाडाका लेखक) हरु छन्, कहलिएका संचारगृह पनि छन्, नाम चलेका कानुन व्यवसायी पनि छन्, मानवअधिकारका उद्योगीव्यवसायी पनि छन् र दलीय पक्षधरताले ओतप्रोत तथाकथित नागरिक समाजका अगुवा पनि छन् । सभामुख सापकोटालाई फ्ल्यासब्याकमा लैजाने हो भने ती सबैको एकएक चित्र सबैको दिमागमा तयार हुन्छ । हेगको भुतको विषयमा धेरै चर्चा भइसकेको छ । पुष्पकमल दाहाल आफैंले ‘हेगमा उभिन पाए संसारले चिन्थ्यो’ भन्ने मोह प्रकट गरिसकेपछि अरु के नै बोल्नु ! बरु फ्ल्यासब्याकमै बसौं ।
क–कसलाई उभ्याउने ?
तर ककसलाई कठघरामा उभ्याउने ? अपराधको बहिखाता बनाउने कसले ? कहिले ? कसरी ? हिसाब त दिलबहादुर रम्तेलको हत्याको कोणबाट पनि शुरु हुन पर्ने हो नि । हुँदैन । न साउनेपानीको सामूहिक हत्याकाण्ड आउँछ न दोरम्बा, न वाफिकोट हत्यकाण्ड आउँछ न अनेकोट न । २०५२ फागुन १५ गते नै भएको मेलगौरी सामुहिक हत्याकाण्ड त राष्ट्रपतिका कुनै पूर्व वा बहालवाला सल्लाहकारको कानमै पर्दैन । किन ? न जाजजरकोट किसान हत्याकाण्ड आउँछ न कौवाघारी । न जोगिमारा आउँछ, न भैरवनाथ शिवपुरी हत्याकाण्ड आउँछ न गौर राइसमिल । हामी उज्जनकुमार र निर्मल लामामा अल्झिएर बाँकि दर्जनौं नरसंहारलाई पीठ देखाइरहेका छौं । नत्र सुन्नुभएको छ कसैले ती हत्याकाण्ड र वेपत्ताका आरोपीविरुद्ध बोल्ने स्वार्थसमूह ? नो ।
हिजो राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोग विधेयक सदर नगर्न शितलनिवाससँग हारगुहार गर्ने राजदूत र अधिकारवादीहरु गल्लीपिच्छे भेटिन थालेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले विदेशी राजदूतहरुलाई च्यानल क्रस नगर्न र मर्यादामा रहन सचेत गराएको हामीले देखेकै हौं ।
हामीले पत्रकार डेकेन्द्र थापा प्रकरण झेल्यौं, पूर्व सभाषद् केशव राईको मुद्दा पनि हेर्यौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधान पनि हेर्यौं । फौजदारी न्याय प्रणालीका अन्तर्वस्तु पनि हेर्यौं । शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई विदेशी शक्तिले अड्काइरहेको देव गुरुंगका दावीहरु हर्यौं र सुन्यौं । सिहंहबहादुर शाही र शक्ति गुरुंगहरु हेर्यौं । सैनिक अदालतका निर्णयमा सदर ल्याप्चे ठोक्ने अदालत पनि हेर्यौं । द्वन्द्वको नेगेटिभ र खरानीको व्यापार त्यतिबेलासम्म चलिरहन्छ जबसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानवीनको विषय सल्टँदैन भन्ने सत्यमा बहस नगरौं । तर दुवै विषयमा विदेशी शक्तिले आफ्नो दुनो सोझ्याउन यथासक्य प्रयत्न गरिरहेको सत्यमा बहस नगरौं । राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थबाट स्खलित हुँदै द्वन्द्वको एकोहोरो डमरु बजाएर नाचिने ताण्डवले कुन महादेव खुसी होलान् ? यसबारे बहस गरौं ।
अन्त्यमा, अमेरिका भ्रमणका लागि सापकोटाले दिएको प्रवेशाज्ञा आवेदन दुतावासले २०६७ असारमा अस्वीकार गरेको थियो । काठमाण्डौस्थित अमेरिकी दुतावासले अग्नि सापकोटाको विषयमा ९ वर्षअघिको निर्णय पुनःविचार गर्ला कि नगर्ला ?